नेपाली जनताका हिरो रबि लामिछानेले फेरी अर्को घटनाको खुलासा गरे !! निशा गुरुङले रबि लामिछानेलाई भेट्दा यस्तो भनिन् !! – Complete Nepali News Portal
नेपाली जनताका हिरो रबि लामिछानेले फेरी अर्को घटनाको खुलासा गरे !! निशा गुरुङले रबि लामिछानेलाई भेट्दा यस्तो भनिन् !!
ScotNepal December 15, 2017
भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगि, अनियमिता र समाजमा देखिएको कुरुति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगिका घटनालाई पर्दाफास गरेर पत्रकार लामिछाने अहिले चर्चाको शिखरमा छन् ।अस्टमि गुरुङको केशलाई लिएर आइले रबि लामिछाने आबुदाबि पुगेका थिए ।मुकुन्दे नाम गरेका एक व्यक्तिले रबि लामिछानेले गरेको कामको बिरुद्धमा उत्रिएका छन् ।
घरेलु कामदारका रुपमा दुवई भनेर ओमन पु¥याइएकी झापाकी निशा राई हाम्रो पहल पछि नेपाल फर्कीएकी छिन् । ओमनमा घरमा गर्ने उनी खुट्टा चल्न नसक्ने भएपछी नेपाल फर्कीन खोजेकी थिइन । तर काम गर्ने घरधनीले उल्टो काम थप्ने र उपचार गर्न नदिएर विच्चलीमा परे पछी उनले हामीलाई भिडियो रेर्कड पठाएकी थिइन । रबि लामिछानेले फेरी अर्को एक डरलाग्दो घटनाको खुलासा गरेका छन् तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।